Ekpere RETREAT Archives - Okwu Ugbu A
Akwukwo Nso na Mark
Ihe na February 5, 2016 March 6, 2019 by Mark
EGO Oge a "ezumike" n'oge a gara aga, okwu a "Ndị Kọlọsi 2: 1”Mara m n’obi otu ụtụtụ.
Ihe na February 9, 2016 February 17, 2021 by Mark
site n'aka Ọchịagha Richard Brehn, NOAA Corps
Pịgharịa gaa na ala iji gee ntị na pọdkastị nke ntụgharị uche ọ bụla ma ọ bụrụ na-ịchọrọ. Cheta, ị nwere ike ịchọta ụbọchị ọ bụla ebe a: Ekpere ezumike.
WE na-ebi n'oge pụrụ iche.
Ma n’etiti ha, lee ị dị. Obi abụọ adịghị ya, ikekwe ọ ga-adị gị ka ike agwụla gị n’ihi ọtụtụ mgbanwe ndị a na-eme n’ụwa anyị a - onye egwuregwu na-abaghị uru, onye na-enweghị mmetụta ọ bụla n’ụwa gbara gị gburugburu, ma ya fọdụzie usoro ihe mere eme. Ikekwe ọ dị gị ka a ga-asị na ị kekọtara ụdọ nke akụkọ ihe mere eme ma na-adọkpụrụ gị n'azụ Nnukwu Sgbọ Oge, na-atụgharị ma na-enweghị enyemaka na mbilite ya. Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Podcast: Play na ọhụrụ window | Budata site na ntaneetị
Ihe na February 11, 2016 April 27, 2017 by Mark
ỌHR!! Ana m agbakwunye pọdkastị na Lenten Retreat a (gụnyere ụnyaahụ). Pịgharịa gaa na ala iji gee site na ọkpọ egwu mgbasa ozi.
TUPU Enwere m ike ide n'ihu, Achọpụtara m na Nwanyị anyị na-ekwu na, ewezuga na anyị nwere okwukwe na Chineke, ọdịghị ihe ọbụla n’ime ndụ nke mmụọ anyị nke ga-agbanwe. Ma obu dika St. Paul tinyere ya…
… Enweghị okwukwe ọ gaghị ekwe omume ime ihe dị Ya mma. N'ihi na onye ọ bụla nke na-abịaru Chineke nso ga-ekwere na ọ dị adị, na ọ na-akwụghachikwa ndị na-achọ ya ụgwọ ọrụ. (Hib 11: 6)
Na Faithbụ Onye Kwesịrị Ntụkwasị Obi
Ihe na February 12, 2016 April 17, 2017 by Mark
Ezigbo ndị enyi m, nke a abụghị ntụgharị uche m zubere maka taa. Agbanyeghị, enwere m nsogbu dị iche iche na nsogbu ọzọ kemgbe izu abụọ gara aga, n'eziokwu, na-ede echiche ndị a mgbe etiti abalị gafere, na-ewe naanị awa anọ ụra n'abalị n'izu gara aga. Ike gwụrụ m. Ya mere, mgbe m gbusịrị ọtụtụ obere ọkụ taa, ekpegara m ekpere maka ihe m ga-eme — ederede a batara m n'uche ozugbo. Ọ bụ, nye m, otu n'ime "okwu" kachasị mkpa n'obi m afọ a gara aga, dịka o nyeere m aka n'ọtụtụ ọnwụnwa site na ichetara onwe m "ikwesị ntụkwasị obi." N’ikwu eziokwu, ozi a bụ akụkụ dị mkpa nke Lenten Retreat. Daalụ maka nghọta.
M rịọ mgbaghara na e nweghị Podcast maka taa… M nnọọ nke gas, dị ka ọ fọrọ nke nta 2am. Enwere m ihe dị mkpa “okwu” na Russia na m ga-ebipụta n'oge na-adịghị I've ihe m na-ekpe ekpere banyere ebe ikpeazụ okpomọkụ. Daalụ maka ekpere gị…
Ihe na February 12, 2016 April 27, 2017 by Mark
IT kwuru n'akwụkwọ Ilu,
N’enweghị ọhụụ ọ bụla, ndị mmadụ na-ejide onwe ha. (Ilu 29:18)
N'ụbọchị mbụ nke Lenten Retreat a, yabụ, ọ dị oke mkpa na anyị nwere ọhụụ nke ihe ịbụ Onye Kraịst pụtara, ọhụụ nke Oziọma. Ma ọ bụ, dị ka onye amụma Hosea kwuru, sị:
Ndi nkem alawo n’iyì n’amaghi-ama! (Hosea 4: 6)
Ihe na February 13, 2016 April 27, 2017 by Mark
BỤ ị ka so m? Ọ bụ ugbu a 5bọchị XNUMX nke nloghachi anyị, ekwenyesiri m ike na ọtụtụ n'ime unu na-agba mgba na ụbọchị ndị mbụ a iji nọrọgidesi ike. Mana were nke ahụ, ikekwe, dịka ihe ịrịba ama na ịnwere ike ịlaghachi azụ karịa ka ị matara. Enwere m ike ịsị na nke a bụ ikpe maka onwe m.
Taa, anyị n’ịgbasapụ ọhụụ nke ihe ọ pụtara ịbụ Onye Kraịst na onye anyị bụ n’ime Kraịst…
Ngozi ndi di ngozi
Ihe na February 14, 2016 April 27, 2017 by Mark
nA ya mere, nke ime mmụọ ma ọ bụ nke “ime” nke ndụ mejupụtara na isoro amara rụkọọ ọrụ ka ndụ nsọ nke Jizọs wee biri na site na mụ Ya mere oburu na Okpukpe Kraist bu Jisos nke emere site na m, olee otu Chineke puru isi me ka nke a kwe omume? Nke a bụ ajụjụ maka gị: olee otu Chineke si mee ka o kwe omume oge mbu ka e guzobere Jisos n'anụ aru? Azịza ya bụ site na Mmụọ nsọ na Mary.
Ikike Onwe Gị
Ihe na February 16, 2016 April 27, 2017 by Mark
MY mu na nwanne nwoke na ekikọtara n’otu ọnụ ụlọ na-etolite. E nwere ụfọdụ abalị anyị na-enweghị ike ịkwụsị ịchị ọchị. A na-apụghị izere ezere, anyị ga-anụ nzọụkwụ nke nna na-agbadata na paseeji ahụ, anyị ga-agbadokwa n'okpuru mkpuchi ahụ dị ka ànyị nọ n'ụra. Mgbe ahụ ọnụ ụzọ ga-emeghe…
Na ilitydị Umeala n'Obi
Ihe na February 16, 2016 November 16, 2017 by Mark
IT bụ otu ihe inwe mmata nke onwe; iji hụ nke ọma ihe bụ ezie na mmadụ dara ogbenye n'ụzọ ime mmụọ, enweghị omume ọma, ma ọ bụ ụkọ ọrụ ebere — n'otu okwu, ịhụ abys nke nhụjuanya mmadụ. Mana imata onwe gi ezughi oke. A ghaghị ịlụ ya ịdị umeala n'obi ka amara we di ire. Tụlee ọzọ Pita na Judas: ha abụọ zutere na eziokwu nke nrụrụ aka ha dị n'ime, mana na nke mbụ ihe ọmụma onwe onye ka ejiri wedata obi ala, mana na nke ikpeazụ, ọ lụrụ di mpako. Dị ka Ilu si kwuo, Nganga na-aga tupu mbibi, mmụọ mpako na-abịakwa tupu ọdịda. ” Prov 16: 18
Agbụrụ nke Ebere
Ihe na February 17, 2016 April 27, 2017 by Mark
THE pathzọ izizi nke Onye-nwe-anyị ga-esi wee gbanwee ịgbanwe mkpụrụ obi meghere mgbe onye ahụ, mgbe ha hụrụ onwe ha n ’ìhè nke eziokwu, kwenyere na ha dara ogbenye na mkpa ha maka Ya n’ime mmụọ nke obi umeala. Nke a bụ amara na onyinye nke Onyenwe anyị n’onwe ya bidoro nke hụrụ onye mmehie n’anya nke ukwuu, na Ọ na-achọ ya maọbụ karịa, ọkachasị mgbe ha nọ n’ọchịchịrị nke mmehie. Dị ka Matthew Onye Ogbenye dere…